ဂျပန်စတိုင် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဂျပန်မလေးတစ်ယောက်လို လှနေတဲ့ မေကဗျာ - Cele Platform
ဂျပန်စတိုင် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဂျပန်မလေးတစ်ယောက်လို လှနေတဲ့ မေကဗျာ
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ဟိုးအရင် ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေ ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ပရိတိသတ်အားပေးမှု အင်းအားတွေလုံးဝလျော့မသွားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးကတော့ မေကဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြနိုင်တာကြောင့် အားလုံးရဲ့ လက်ခုပ်သံတွေက သူမအတွက်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။
သူမဟာ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ဟိုးအရင်တုန်းကလို လှပ နုပျိုနေဆဲပဲဖြစ်ပြီးတော့ ကလေးတစ်ယောက်မိခင်ဖြစ်သွားသည့်တိုင်အောင် ချစ်စရာကောင်းနေဆဲ မင်းသမီးလေးတစ်လက်ပါနော်။ သူမဟာ အနုပညာလောကနဲ့ အချိန်အတော်ကြာကြာ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ အနုပညာနယ်ပယ်ထဲကို အခြေပြန်ချပြီး ဇာတ်ကားတွေဇာတ်တိုက်ရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။
ကလေးတစ်ယောက်မိခင်လို့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမထင်ရတဲ့ မေကဗျာဟာ ထာဝရနုပျိုတဲ့အလှအပနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပြန်ပါပြီနော်။ အပွင့်အခက်တွေနဲ့အရောင်အသွေးစုံစွာလှပနေတဲ့ ဂျပန်စတိုင်ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဂျပန်လူမျိုးမိန်းမပျိုလေးအလား ပရိတ်သတ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ… ဂါဝန်အနက်အတိုလေးနဲ့ ဂျပန်မလေးတစ်ယောက်လို ထူးထူးခြားခြားလှပနေတဲ့ မေကဗျာရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Myanmarload
ခဈြပရိတျသတျကွီးရေ…. ဟိုးအရငျ ဗီဒီယို ဇာတျကားတှေ ခတျေစားနတေဲ့အခြိနျကစပွီးတော့ ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ ပရိတိသတျအားပေးမှု အငျးအားတှလေုံးဝလြော့မသှားတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးကတော့ မကေဗြာပဲဖွဈပါတယျနျော။ ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပီပွငျပွငျနဲ့ သရုပျဆောငျပွနိုငျတာကွောငျ့ အားလုံးရဲ့ လကျခုပျသံတှကေ သူမအတှကျဖွဈနခေဲ့ရပါတယျ။
ကလေးတဈယောကျမိခငျလို့ကိုဘယျနညျးနဲ့မှမထငျရတဲ့ မကေဗြာဟာ ထာဝရနုပြိုတဲ့အလှအပနဲ့ ပရိတျသတျတှကေိုအံ့အားသငျ့စခေဲ့ပွနျပါပွီနျော။ အပှငျ့အခကျတှနေဲ့အရောငျအသှေးစုံစှာလှပနတေဲ့ ဂပြနျစတိုငျဖကျရှငျလေးနဲ့ ဂပြနျလူမြိုးမိနျးမပြိုလေးအလား ပရိတျသတျတှရေဲ့နှလုံးသားကိုသိမျးပိုကျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ကဲ… ဂါဝနျအနကျအတိုလေးနဲ့ ဂပြနျမလေးတဈယောကျလို ထူးထူးခွားခွားလှပနတေဲ့ မကေဗြာရဲ့ ခဈြစရာပုံရိပျလေးတှကေို ခဈြပရိတျသတျတှအေတှကျပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။Myanmarload